Iyo Apple Watch yakarambidzwa muUK Government | Ndinobva mac
Iyo Apple Watch yakarambidzwa muUK Government
Mamwe mayunivhesiti nezvikoro zvave kudzikisira kushandiswa kwemawachi akangwara mukirasi kuvadzidzi kwechinguva kuitira kuti varege kutsauswa uye kunyanya kuti vasakwanise kuishandisa semubatsiro mumayedzo kana bvunzo dzinoitwa. Zvino nhau nezvekurambidzwa uku kushandiswa dzinouya kubva kuhurumende yeUK iyo haibvumiri kushandiswa kweApple Watch mumisangano uye kwete kuvashandi vesangano. Mukudaro, uyu mutemo mutsva unotarisa zvakananga pane mukana wekuti vamwe vevashandi vanogona kurekodha kana kusora kutenda kune wachi.
Muchidimbu, iri danho risinganzwisisike tichitarisa huwandu hwenhare mbozha, mapiritsi, makomputa uye zvimwe zvishandiso zvavanoshandisa uye zvinogona kushandiswa zvevasori uye kunyangwe kubiridzirwa nevechitatu uye kuwana ruzivo rwakavanzika kubva kuhurumende yeUK. Chiyero chave chiri kuongororwa kwenguva yakati uye zvino Mutungamiriri weUnited Kingdom neNorthern Ireland, Theresa May, anga achitungamira kutsikisa nhau.
Zvinogoneka kuti kukura kuri kuita cyber kurwisa kwakagamuchirwa nehurumende (kunyanya kurwisa kweRussia) kutenderera pasirese ndicho chikonzero nei mutemo uyu uchitanga kuiswa mumatare. Nhasi zviri nyore kubira michina uye kuwana ruzivo rwakavanzika kubva kuhurumende nekuda kwekuwedzera kwekushandisa kweizvi mumisangano nemaparamende, asi isu tinofanirwa kufunga nezvekuchengetedza matanho uye zvakanakira zvinopihwa nemidziyo.
Panguva ino muUnited Kingdom Apple Watch haisisiri kugamuchirwa zvakanakaIzvozvi zvinoramba zvichionekwa kuti nyika ngani dzinobatana nechirongwa ichi chakatanga mune mamwe emayunivhesiti akakosha kudzivirira kubiridzira mune bvunzo uye chiri kuwedzera zvishoma nezvishoma muhurumende dzepasirese nekutya kuve vasori.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Iyo Apple Watch yakarambidzwa muUK Government
Apple inoburitsa beta 3 yeTVOS 10.0.1
Maitiro ekutarisa iro bhatiri nhanho yebluetooth keyboard uye mbeva yeMac yedu